Iyini I inzuzo enkulu zemininingwane Amathikithi Online? | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela > Iyini I inzuzo enkulu zemininingwane Amathikithi Online?
(Kugcine ukubuyekezwa On: 30/03/2020)
Ihlobo engqongqoza iminyango nabantu uhlela ukuchitha epholile ihlobo iholide ezindaweni ezahlukene. Ukubhukha ka isitimela amathikithi wakho kungaba ezinzima njengoba kuzoba khona omude futhi uma ufuna enye ezithakazelisayo ukubhuka amathikithi yakho, yokubhuka inthanethi kungaba inketho enhle.
Uma ucabanga mayelana emigqeni emide futhi ngizibuza indlela ukubhuka ithikithi lami isitimela i iholide oluzayo, nakhu ibhulogi egqamisa enkulu izinzuzo inthanethi ithikithi yokubhuka kanye uwageje ke.
Uma kwenzeka bakhathazekile amahora rush futhi ukucabanga nendlela ukubhuka ithikithi lami ngesitimela iholide, kufanele sizame i intanethi. Ukubhuka yakho athenge amathikithi esitimela ngemali kuyinto elula futhi ungakwazi weqa emigqeni emide ngesikhathi esifanayo. Ungakwazi ukubhuka amathikithi yakho usebenzisa smartphone nekhompyutha kanye lula niyenzé kuyadingeka ukuze abagibeli.
Uma uzimisele ukuba ukubhuka amathikithi yakho ngesandla, une ukuya esiteshini bese ume emgqeni. Nakuba intanethi kungenziwa kunoma iyiphi indawo futhi ungenayo sokuchitha amahora emgqeni. Manje ungakwazi ukubhuka amathikithi yakho endleleni eya ehhovisi futhi yingakho kukhona abaningi abakhetha intanethi ngalutho.
Abanye abantu bathambekele exinwe yokukhokha inthanethi futhi kungakho bavame ukuba ukubhuka amathikithi ngesandla. Kumele sizilungiselele ukutshela abafundi ukuthi uma ukuthenga athenge amathikithi esitimela ngemali kusukela website ogunyaziwe, ungenalo sikhathazeke ukukhokhelwa ephephile. Namuhla uzothola amawebhusayithi amaningi ukuba ukubhuka amathikithi inthanethi futhi siphakamisa ukuthi abafundi ukuhlola ewebhu amaningi ukuze uthole engcono izitimela amadili inthanethi.
Uma ukuthenga amathikithi akho isitimela inthanethi, ungathola izaphulelo ezikhethekile kwamanye izipesheli ezikhethiwe ngezikhathi ezithile futhi kufanele unake website ukuzuza lokhu kunikezwa. Uma kwenzeka uyazibuza kanjani ukubhuka ithikithi lami isitimela, ungabheka namawebhusayithi ungathola ithikithi efanayo ngentengo encishisiwe.
Sekukaningi sithola lenqwaba imibuzo ezivela kubafundi bethu labo abawucela ezisekelweni esinokwethenjelwa ukuthenga amathikithi isitimela indiza. Londoloza Isitimela ingenye amawebhusayithi onedumela elihle kakhulu yokubhuka amathikithi akho isitimela inthanethi futhi uma uyazibuza kanjani ukubhuka ithikithi lami isitimela i iholide oluzayo, esethemba ukuthi kakade indlela yokukwenza.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog, noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/what-is-the-biggest-advantage-of-train-tickets-online/- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
#ticketsonline inzuzo trainticket traintickets Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Izikhangibavakashi